फेसबुक विज्ञापन : युरोप जान ८ लाख, १ महिने विशेष अफर – MySansar
– सन्तोष न्यौपाने/बेल्जियम –
‘पोर्चुगल,माल्टा,चेक रिपब्लिक : केवल ८ लाख मात्रै। १ महिने विशेष अफर। सम्पर्क गर्नुहोला।
3 thoughts on “फेसबुक विज्ञापन : युरोप जान ८ लाख, १ महिने विशेष अफर”
यसो सुन्दा हाम्रो सुदुर पश्चिम का केहि गीत हरप पो याद आइच्छ
खासी भासाको लयमा लाउरे ठगिएको सिमानामा
लप्सी को बोट मुनि आगो दन्कायो …. दन्कायो …
लाको टुपी हेरदा भरिया को डालो कन ठायो कन ठायो …
लप्सी को रुख मुनि आगो दन दन ….आगो दन दन….
लाको टुपिले भरियाको डालो कन ठन कन ठन
Rames bastola says:
अर्जुन जी को पोल कहा खुल्यो र?? त्यो काण्डको बारेमा सबैलाई थाहा छ क्यारे सायद।अहिले पोर्चुगल आएर खोज्नु भयो भने सबै पत्तो लाग्छ। मैले उपलब्ध गराइदिन्छु व्यक्तिहरू। नभए त्यतिखेरका समाचार हेर्नुहोस।पत्तो लाग्छ।
नमस्कार पत्रकार ज्यू, लेख राम्रो र सान्दार्भिक लाग्यो । समयसाक्षेप पनि छ । हजुरको विज्ञापनमा रेस्पोन्स त राम्रै आएछ तर त्यो फेक विज्ञापन थियो भनेर लेखमा छैन जस्तो लाग्छ । अर्थात् अलि अलि काम पनि भयो कि ? हजुरले अर्जुनजीको पोल त खोलिदिनु भयो तर फेसबुकमा फेक विज्ञापन दिनु मिल्छ र ? अर्जुन जीले फेसबुकमा दसी प्रमाण सहित पोल खोलिदिए भने नि फेरी ? डर पो लाग्यो ।